Homeसमाचारकोरोना संक्र’मणबाट नर्स सावित्री भट्टराईको दुखद नि’धन
May 17, 2021 admin समाचार 1021
यस्तै नर्स चुनीमैंया श्रेष्ठको वैशाख २९ गते हृदय’घातका कारण नि’धन भएको छ । श्रेष्ठ नर्सिङ संघ शाखा पाल्पा संस्था’पक सचिव हुनुन्थ्यो ।
संघले दुवै नर्सको नि’धनप्रति दुख व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदन व्यक्त गरेको छ । हेल्थपाटिबाट
यो पनि, अक्सि’जन अभावले उपचारमा समस्या
मकवानपुरमा एउटा पनि व्यावसायिक रुपमा अक्सिजन उ’त्पादन गर्ने उद्योग नहुँदा जिल्लामा आवश्यक अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । जिल्ला’भित्र अक्सिजन उद्योग नहुँदा बाहिरी जिल्लाबाट अक्सिजन सिलिन्डर भरेर ल्याउन झन् समस्या हँुदै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लामा सहजै रुपमा मा’गअनुसार पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन आपूर्तिमा अभाव हुँदा जि’ल्लाका विभिन्न अस्पतालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमित बिरामीको उपचारमा समस्या हुँदै आएको हो । वाग्मती प्रदे’शको हेटौँडा अस्पतालसहित हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१, भिन्तुनापथस्थित मकवानपुर सहकारी अस्पता’ल र थानाभ¥याङस्थित चुरेहिल हस्पिटलले कोभिड–१९ बिरामीको उप’चार गर्दै आइरहेका छन् ।
यद्यपि सबै स्वास्थ्य संस्थाले आवश्य’कताअनुसार सहजै रुपमा अक्सिजन व्यवस्था’पन नभएको भन्दै थप बिरामी उपचार गर्न कठिनाइ हुने जनाउँदै आएका छन् । अन्य जिल्लाका अक्सि’जन उद्योगको भरपर्नुपर्ने अवस्थाका कारण जिल्लामा सहज आपूर्ति नहुँदा बिरामीको उपचार’समेत समस्या हँुदै आएको हेटौँडा अस्पताल व्यवस्था’पन समितीका सदस्य सुपेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
आजको अवस्था’मा तीनवटा स्वास्थ्य संस्थामा दैनिक रुपमा २५० अक्सिजन सिलिन्डर आव’श्यकता पर्ने गरे पनि हाल दैनिक २१० सिलिन्डर मात्र प्राप्त हुँदै आएको छ । बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा झन् अक्सि’जनको माग बढी हुँदै जाने भएकाले जिल्लामा अक्सिजन अभावको समस्या बढ्दै गएको अस्पताल व्यवस्था’पन समितिका सदस्य कार्कीले जान’कारी दिनुभयो ।
कोभिड–१९ का बिरामी उपचार गर्दै आएका ती’नवटा स्वास्थ्य संस्थाका अनुसार हाल प्राप्त अक्सिजन सिलिन्डरका आधारमा उपचार गराइरहेका बिरा’मीलाई धान्नै मुस्किल परेको अस्पतालले जनाएका छन् । हाल हेटौँडा अस्पतालसहित अन्य निजी दुईवटा अस्प’तालमा करीब २५० सिलिन्डर माग हुँदै आए पनि करीब २१० मात्र सिलिन्डर व्यस्थापन हुँदै आएको र थप सिलिन्डर व्यस्थापनका लागि आव’श्यक पहल भइरहेको जिल्ला प्रशासन का’र्यालयका प्रशासकीय अधिकृत देवचन्द्र गर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।
अक्सिजन उद्योग मक’वानपुरमा नभएकै कारण खाली सिलिन्डर लिएर बारा, चितवन, नुवाकोट, विराटनगरलगायतका जि’ल्लामा भर्न जानुपर्ने बाध्यता छ । कोभिड–१९ का बिरामीलाई मकवानपुरका स्वास्थ्य संस्थामा चाहिने अक्सि’जन चितवन, पूर्वी नवलपरासी, बारा, पर्सालगायत जिल्लामा रहेका उद्योगबाट हुँदै आएको अक्सिजन आपू’र्ति पर्याप्त छैन ।
बिरामी उ’पचार गर्न नसकिने
वाग्मती प्रदेशको रा’जधानी हेटौँडामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित चुरेहिल हस्पिटल प्रालि र मक’वानपुर सहकारी अस्पतालले कोभिड–१९ का बिरा’मीको उपचार गर्न नसक्ने जान’कारी गराएका छन् । दुवैले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति नि’काल्दै कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्नु र अक्सिजनको सिलिन्डर अभाव भएकाले उपचार गर्न नस’क्ने जनाएको हो ।
चुरेहिल हस्पिटल प्रालि र मक’वानपुर सहकारी अस्पतालले क्रमशः १० र २० श्यया गरी ३० श्ययाको सेवासहितको कोभिड–१९ का बिरामीलाई उप’चार सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । विगत एक–दुई दिनदेखि बाहिरी जिल्लाबाट हेटाँैडामा ख’पत हुने आवश्यकताअनुसार अक्सिजन सिलिन्डर आउन छोडेकाले कोभिडका बिरामीको उपचारमा समस्या उत्पन्न भएको छ । दुईवटा अस्प’तालमा ३० श्ययाको एचडियु सेवासहितको कोभिड उपचार गरी आइरहेको र अक्सिजनको सिलिन्डर आपू’र्ति नभएकाले उपचार गर्न नसक्ने विज्ञप्ति’मार्फत सबैलाई जानकारी गराइएको छ । इताजा खबरबाट
December 30, 2020 admin समाचार 4667
October 5, 2020 admin समाचार 9925
काजुमा म्याग्ने’सियम, कपर, आइ’रन, पोटासियम लगाय’तका पोषक तत्व पाइन्छ । काजु’लाई ऊर्जा’को राम्रो स्रोत मानिन्छ । यस अला’वा यसमा बिभिन्न भिटामीन, क्या’ल्सियम लगायतका तत्व समेत पाइन्छ । जसले शरी’रमा अनेकौं प्रकारको ला’भ पुर्याउँछ । यस्तो
February 3, 2021 admin समाचार 2721
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (193893)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (186490)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (186016)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (185954)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (184118)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (183901)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (182459)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (181557)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (175153)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (151752)